कप्सको फस्ट लुक्स पोष्टरमा एक्सन कथा, को-को छन् कलाकार ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
कप्सको फस्ट लुक्स पोष्टरमा एक्सन कथा, को-को छन् कलाकार ?
जेठ ९ गते, २०७६ - १५:०४
काठमाडौं । आगामी १७ जेठबाट देशव्यापी सिनेमा हलमा रिलिज हुने चलचित्र ’कप्स’ को अफिसियल पोष्टर (फस्ट लुक्स) बिहिबार रिलिज भएको छ ।
फिल्मको दुई ओटा पोष्टर रिलिज गरिएको छ । जस मध्य सिक्स सिटर पोष्टरमा फिल्मका चार मुख्य कलाकार अभिनेता अनुप बिक्रम शाही, नव अभिनेत्री सन्दिपा लिम्बु, अनुपा भट्टराई र अमित गिरी समेटिएका छन् । जसमा अनुप डिएसपीको रुपमा र संदीपा घाईते युवतीको रुपमा छन् ।
एक्शन तथा लभस्टोरी कथा मिश्रित चलचित्र कप्समा अनुप बिक्रम शाही प्रहरी नायब उपरिक्षकको भूमिकामा छन् । यस चलचित्रमा अभिनेता शाहीले डीएसपी अमन सिंहको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अनुप प्राय खल पात्रको भूमिकामा देखिँदै आएका थिए भने यस चलचित्रमा भने एक सच्चा प्रहरी अफिसरको रुपमा छन् । सत्य सेवा सुरक्षणम् नारा बोकेको यो फिल्ममा अपहरणकारी, भ्रस्टाचारी, गुन्डागर्दी बिरुद्धको कथामा केन्द्रित छ ।
अग्रज कलाकार सम्राट सापकोटाको निर्देशनसँगै लेखन रहेको छ । यो उनको यो डेब्यु निर्देशन फिल्म हो । तीन दशक लामो फिल्मी यात्राको अनुभव समेटेर उनले निर्देशनमा हात हालेका हुन् ।
अनुपसँगै यो फिल्ममा सन्दिपा लिम्बु, अमित गिरी, रामराज क्षेत्री, पुरन जोशी, नन्दु श्रीवास्तब, सुन्दर श्रेष्ठ, बब्लु विक्रम थापा, अनुपमा भण्डारी, रोशन सुवेदी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
फिल्म आर्या मुभिज र सारा श्री मुभिजको संयुक्त व्यानरमा निर्माण भएको हो । यो चलचित्रलाई राम शाक्यले निर्माण गरेका हुन् । कप्समा सुसन प्रजापतिको छायाँकन, बिजय घिमिरेको संगीत, कविराज गहतराजको नृत्य, बिपिन मल्लको सम्पादन रहेको छ ।
जेठ ९ गते, २०७६ - १५:०४ मा प्रकाशित
बिहीबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो, कुन देशकाे कति छ ?